यायोक्खाको गतिबिधी दस्तावेजिकणका लागि स्मारिका प्रकाश गरिदै | रेडियो झापा 100.7 MHz.
यायोक्खाको गतिबिधी दस्तावेजिकणका लागि स्मारिका प्रकाश गरिदै
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, पौष २७, २०७६ १४:३०:५०
२६ पौष / झापा । किरात राई यायोक्खा जिल्ला कार्य समिमिति झापाले स्मारिका प्रकाशन गने भएको छ । किरात राई यायोक्खा जिल्ला कार्य समिति झापाको मिति २०७६ कार्तिक ३० गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
स्मारिका प्रकाशनका लागि छलफल कार्यक्रम विर्तामाेडमा
स्मारिका प्रकाशनका लागि प्रकाशन सहयाेगार्थ पहिलाे सहयाेगी क्या. शिवकुमार राईलाई सहयाेग रसिद प्रदान गर्दै संयाेजक सुसन राई